Usandibvunze kuti chii chinonzi POF kupisa chinodzikira firimu, ndikuudze pazasi?
Ndeupi musiyano uripo pakati POF shrink firimu uye polyvinyl chloride shrink firimu?
POF shanu-rukoko co-extruded kupisa inodzikira firimu chigadzirwa chitsva chechizvarwa chakabuda zvishoma nezvishoma mumakore achangopfuura uye chakagamuchirwa nevanhu. Iyo yakasvikika-inoshamwaridzika yakawanda-rukoko co-extruded polyene yakasanganisa POF kupisa inodzikira firimu inoshandisa mitsara yakaderera-density polyethylene (LLDPE) seye m ...
Kuenzanisa kwemuviri weiyo POF inodzora firimu uye PE uye PVC yekudzora firimu?
1. Mutengo POF chikamu chiri 0.92, ukobvu ndi0.012mm, iyo chaiyo unit mutengo yakaderera. Pe chikamu chiri 0,92, ukobvu iri 0.03 kana kupfuura, chaiyo yeyuniti mutengo yakakwira. PVC chikamu i1.4, ukobvu ndi0.02mm, iyo chaiyo unit mutengo yakakwira. 2. Hunhu hwePOF hwakaonda uye hwakaoma, unif ...
Polyolefin Pof Shrink Firimu, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha,